भारतको इसारामा पार्टी फुटाउन र सत्ताका लागि चार भाइको रिहर्सल! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतको इसारामा पार्टी फुटाउन र सत्ताका लागि चार भाइको रिहर्सल!
काठमाडौं-: सत्तारुढ नेकपाभित्र तनावको अवस्था बनेको छ । अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतरका चार नेताहरूले पत्रकार भेटघाट गरेर ओलिविरुद्ध अन्तिम लडाईको उद्घोष गरेपछि बालुवाटारमा हंगामा मच्चिएको छ ।लामो समयदेखि स्थायी कमिटि बैठक बस्न सकेको छैन´ ।
आन्तरिक शक्ति संघर्षका लागि धेरै समीकरणहरु बन्ने भत्कने गरिरहेका छन् । यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका चार शीर्ष नेताले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरे´ । दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी उक्त पत्रकार भेटघाटमा नेकपाभित्रको विवादबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको थियो` ।उक्त पत्रकार भेटघाटमा नेताहरुले नेता कार्यकर्तालाई जस्तोसुकै अवस्थाका लागि पनि तयार रहन आग्रह गरे । उक्त कार्यक्रमबाट बालुवाटार अर्थात् नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा खैलाबैला मच्चिएको छ’ ।
नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमलाई चर्चाको बिषय बनाएका छन् । यसको संकेत प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले विहीबार बिहान सार्वजनिक गरेको सन्देशबाट स्पष्ट हुन्छ ´। उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको गतिविधिलाई ‘नेकपा विभाजन र समाप्त पार्ने कसरत’ र ‘देशीविदेशी षडयन्त्र र चलखेल’ भनेका छन्` ।
नेकपामा देखिएको किचलोलाई थापाले सम्झिएको धोबीघाट गठबन्धन माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षको प्रसंगक रूपमा अर्थ्याएका छन् `। त्यतिबेला अहिलेका ओलीको जस्तै पेलानमा थिए माओवादीका नेताहरु । बुधबार माधव नेपालले ‘यो ओलीपीडितहरुको गठबन्धन हो’ भनेजस्तै त्यो पनि प्रचण्डपीडितहरुको गठबन्धन थियो । विचारले काम नगरेपनि विधि प्रयोग गरेर संख्याबाट प्रचण्डलाई सबक सिकाउन त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले गठबन्धन गरेका थिए ।
दाहाल-नेपाल समूहको गठबन्धनलाई बालुवाटारले ‘नयाँ धोबीघाट गठबन्धन’को संज्ञा दिएको छ ।याे पद, प्रतिष्ठा, गुटबन्दी र भागबण्डा नभएर विधि, पद्दति र एकताकाे लडाई रे ? पार्टी विभाजनकाे खुल्लमखुला हाँक, हाेहल्ला र रिहर्सल थापाले सामाजिक सञ्जालमै सिधै पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् `।
हेर्नुहोस् थापाको स्टाटस-